နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်း (Paraphrasing and Echoing by Guy Perring) - Myanmar Network
နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်း (Paraphrasing and Echoing by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on December 9, 2011 at 11:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးအချို့မှာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါ ပါဝင်တဲ့ ဗွီသုံးလုံး (Vocal = အသံ၊ Verbal = စကားအသုံးအနှုန်းနဲ့ Visual = အမူအရာ) တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နားထောင်ပုံ စတိုင်အမျိုးမျိုး အကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု စတိုင်တွေအကြောင်း၊ ၀ယ်သူတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ စတိုင်တွေအကြောင်းကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
အခု ဆောင်းပါးမှာတော့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာအခြေခံကို တိုးချဲ့ဖို့ လက်တွေ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ မဟာဗျူဟာတွေကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ “communication toolkit” (ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု နည်းလမ်းများအစုအဝေး) တည်ဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုမှာ လိုချင်တဲ့ ထွက်ပေါ်ရလဒ်ကို အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ ရရှိနိုင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။
ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ နားလည်သလို ပြန်လည် ပြောကြားခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းတွေကို ဟာသနှောပြီး ရှင်းလင်း ဖော်ပြ လက်တွေ့အသုံးပြုထားတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ စကားပြောခန်းကို လေ့လာကြည့်ပါ။ နားလည် သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
A: This task is about paraphrasing and also echoing.
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ တစ်ခုကတော့ နားလည်သလို ပြန်လည် ပြောကြားခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်း အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
B: About paraphrasing?
နားလည်သလို ပြန်လည် ပြောကြားခြင်းတဲ့လား။
A: Yes, paraphrasing – it’sabit like rephrasing.
ဟုတ်တယ်၊ နားလည်သလို ပြန်လည် ပြောကြားခြင်းတဲ့၊ ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ် ပြန်ပြောတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။
B: You mean like “putting it in other words”?
အခြားစကားလုံးနဲ့ ပြန်ပြောတာလို့ ဆိုလိုတာလား။
A: That’s right. Using different words to summarise and clarify the meaning for the listener. ဟုတ်တယ်၊ နားထောင်သူအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားအောင် အခြားစကားလုံးတွေနဲ့ အကျဉ်းချုပ် ပြောတာပါ။
B: You also mentioned echoing.
ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်း ဆိုတာလဲ ပါသေးတယ်နော်။
A: Yes, echoing. Echoing is when you as the listener repeat key words to show you are listening, thinking and to confirm you have understood the right message.
ဟုတ်တယ်၊ ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်းဆိုတာ နားထောင်တဲ့သူက အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြန်ပြောတာပါ။ နားထောင်နေတယ်၊ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာကို ပြတယ်၊ သိစေလိုရင်းအချက်ကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာ အတည်ပြုနိုင်တာပေါ့။
B: Help me understand the right message. I see.
သိစေလိုရင်းအချက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည် နိုင်အောင် အကူအညီပေးတာပေါ့၊ သဘောပေါက်ပြီ။
A: Echo questions are also useful to help buildaconversation.
စကားစမြည်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ ထပ်တူလိုက် မေးခွန်းတွေမေးရင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်တယ်။
B: Are they? ဟုတ်လား။
A: Yes, I like them because they allow the person listening to input some energy and interest into the conversation.
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်တော့ သဘောကျတယ်။ နားထောင်တဲ့သူဘက်က စကားပြောဆိုရာမှာ အားရပါးရနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှု တိုးမြင့်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
B: Do they? ဟုတ်လား။
A: Great, isn’t it? အရမ်းကောင်းတာပေါ့နော်။
စာနာနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပြောသူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို အမှန်တကယ် နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ “ဘယ်လို ခံစားရမလဲ သိပါတယ်” ဆိုပြီး တစ်ဘက်သားကို နားလည်ကြောင်းပြောရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ (ကသိကအောက် ဖြစ်စရာတောင် ကောင်းဦးမယ်။) စကားလုံးနောက်ကွယ်မှာ မျက်နှာအမူအရာ၊ ကိုယ်ဟန် အမူအရာတွေက ပြနေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို သိပြီး နားလည်ကြောင်း ပြသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြောနိုင်ပါတယ်။
“That must have made you very happy.” အတော်ပျော်ခဲ့မှာဘဲနော်။
“Really! Did you laugh when he said that?” ဟုတ်လား၊ သူကအဲဒီလိုပြောတော့ ရယ်လိုက်သလား။
“How horrible. Whatascary situation to be in.” ဆိုးလိုက်တာ၊ အခြေအနေက သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းမှာဘဲနော်။
“You seem excited about something.” ဘာတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေတာလဲ။
“That sounds frustrating.” စိတ်ပျက်စရာကောင်းမှာဘဲ။
အကြံပေးချင်ရင် ပြောတဲ့သူ စကားဆုံးတဲ့အထိ စောင့်ပြီးမှာ အကြံပေးပါ။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ချက်ချင်းကြီး ၀င်မပြောပါနဲ့။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပါတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်း၊ ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်းတို့နဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်တယ်။
စာနာနားလည်မှုကို အသုံးပြုပြီး တစ်ဘက်သားရဲ့ ရှုထောင့်ကို နားလည်နိုင်တယ်။
လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်သွားမယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ပြောလိုရင်းအတိုင်း တစ်ဘက်သားက နားလည်သွားပြီလို့လည်း မယူဆထားနဲ့။ ပြောတဲ့အတိုင်း နားလည်သွားအောင် နည်းလမ်းတွေသုံးရမယ်၊ စစ်ကြည့်ရမယ်၊ ပြန်ပြောပြရမယ်။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာ အပြန်အလှန် ရှိကြောင်း မမေ့ပါနဲ့။ နှစ်ယောက်ရှိမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ ရပါတယ်။
(Guy Perring ၏ Paraphrasing and Echoing အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/paraphrasing-and-echoing မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on December 9, 2011 at 11:53
Permalink Reply by MOE ZAW OO on December 9, 2011 at 12:06
Permalink Reply by နေနတ်သမီး on December 9, 2011 at 12:59
Permalink Reply by HtooHtoo on December 9, 2011 at 16:02
great discussion ! ..thankalot ..
Permalink Reply by Moe Moe Thu on December 9, 2011 at 16:49
Really thanks for lesson.
Permalink Reply by Ratan Biswas on December 9, 2011 at 18:15
Permalink Reply by green.leo2007@gmail.com on December 9, 2011 at 18:55
Permalink Reply by kokkogwather on December 10, 2011 at 1:25
" I like it. I want it "
Oh! sorry .It's not onlyasing but also revealing my desire.
Permalink Reply by Moe Thida Aye on December 10, 2011 at 9:59
Thanks ,alot off.
Permalink Reply by Sandar on December 10, 2011 at 11:39
Permalink Reply by Mr.NAING on December 11, 2011 at 18:52
Permalink Reply by Kyaw Min Htun on December 12, 2011 at 8:06
Thanks foraexcellent articles and may you also have more extended knowledge.